Dowladda Soomaaliya oo dacwad ka dhan ah Kenya u gudbisay QM | Somsoon
Home WARAR Dowladda Soomaaliya oo dacwad ka dhan ah Kenya u gudbisay QM
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dacwad ka dhan ah dowladda Kenya waxa ay u gudbisay hey’adda duulimadyada rayidka ah ee Qaramada Midoobey, taas oo magaceeda loo soo gaabiyo ICAO, kaddib markii Sabtidii shalay diyaarad ka soo duushay magaalada Nairobi ay si toos uga degtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose.
Dacwadda ay gudbisay dowladda Soomaaliya ayaa ku qotonta eeday ah in Kenya ay ku xadgudubtay sharciga caalamiga ah ee duulimaadyada hawadda.
Nuuca diyaarada shalay ka dagtay Kismaayo ayaa lagu sheegay Fokker 50, taas oo numbarka diiwaankeedu yahay 5Y-JXJ, kana diiwaan gashan dalka Kenya, waxayna ku duuleysay sida la sheegay shati ay leedahay mid ka mid ah shirkadaha Soomaalida ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho.
Xubno ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa noo sheegay in qorshuhu yahay in diyaaradaas ay ku soo dabushaan madaxda laga hor istaagay ka qeyb galka caleemo saarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, sidoo kalana duulimaadkeeda kan xiga ay ku tagi doonto magaalada Garowe ee xarunta Puntland, halkaas oo ay ka soo qaadeyso xubnaha maamulkaas uga qeyb galaya caleemo saarka Axmed Madoobe.
Dowladda Soomaaliya ayaa horey usoo saartay amar ay Kismaayo uga mamnuucday duulimaadyada aan soo marin magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, waxaana amarkaas jabiyay diyaaraddii shalay ka degtay magaalada Kismaayo.
Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay in Jubbaland ay soo iibsatay diyaaradaas, ayna ku soo daabulanayso madaxda ay dowladda federaalka ka hor istaagtay ka qeyb galka madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe.
Article horeMaxuu salka ku hayaa safarka Wasiir Sabriye uu ku tagay Geneva?
Article socoda Isbedal doonka Jubbaland oo madaxdii hore ee dalka ku eedeeyay in qorshe doorasho ay ka leeyihiin Jubbaland